AbaXhasi abaXuba amayeza abavelisi kunye nabanikezeli-baFektri baseChina abaXhasi
I-Povidone yi-homopolymer ye-1-vinyl-2-pyrrolidone (Polyvinylpyrrolidone), inyibilikiswa ngokukhululekileyo emanzini, kwi-ethanol (96%), kwi-methanol, kunye nezinye izinyibilikisi zendalo, inyibilika kancinci kwi-acetone. umgubo omhlophe okanye iiflakes, ukusuka kumgangatho ophantsi ukuya kwi-viscosity ephezulu kunye nobunzima obuphezulu be-molekyuli, obonakala ngexabiso le-K, kunye ne-hygroscopisty egqwesileyo, ukwenza ifilimu, ukunamathela, ukuzinza kweekhemikhali kunye neempawu ezinobungozi zetyhefu. Iparameters zobugcisa ezingundoqo ...
I-Copovidone ene-60/40 ration ye-N-Vinylpyrrolidone kwiVinyl Acetate, enyibilikayo kwizinyibilikisi ezininzi eziphilayo.Ikho kwifowder, iifom zeCopovidone ezilukhuni, ezisuswayo ezinamanzi kunye nezicwebezelayo, inokuhambelana okuhle kunye neeplastifier ezininzi kunye neenguqulelo. Ukunyibilika okuhle emanzini, utywala kunye nezinye izinyibilikisi zendalo. Iiparamitha zoBugcisa eziPhambili: Inkangeleko yomgubo omhlophe okanye omthubi-mhlophe okanye iiflakes, i-viscoscopic viscosity (Express as K Value) 25.20 ~ 30.24 Unyibilikiso olusinyibilikayo emanzini, ngotywala i ...
ICrospovidone yi-PVP enqamlezileyo, i-PVP enganyibilikiyo, iyinyibilikisi, ayinyibiliki emanzini kunye nazo zonke ezinye izinyibilikisi eziqhelekileyo, kodwa idumba ngokukhawuleza kwisinyibilikisi esinamandla ngaphandle kwejeli. Ihlelwe njengeCrospovidone Type A kunye nohlobo B ngokobungakanani beengqimba ezahlukeneyo. Iiparameter zoBuchule eziPhambili: Imveliso yeCrospovidone Type A Uhlobo lweCrospovidone Uhlobo B Inkangeleko yomgubo omhlophe okanye omthubi-mhlophe okanye iiflegi Ukuchongwa A. Ukufunxa okungafakwanga B. Akukho mbala oluhlaza uvelayo. Ukumiswa kwe-CA ...